नास्टसहित विभिन्न संस्थाको साझेदारीमा नेपालको दोस्रो भूउपग्रह परियोजना सुरु - Dainik Online Dainik Online
नास्टसहित विभिन्न संस्थाको साझेदारीमा नेपालको दोस्रो भूउपग्रह परियोजना सुरु
प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७८, बिहिबार १२ : ५५
काठमाडौंl नेपालमा विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सहभागितामा दोस्रो भूउपग्रह परियोजना सुरु गरिएको छ।
पहिलो नेपाली भू–उपग्रह नेपाली स्याट–१ को सफलतापछि गत बुधबार काठमाडौं युनिभर्सिटी हाइस्कुल, धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच दोस्रो भूउपग्रह परियोजना शुभारम्भ गरिएको हो।
यो परियोजनामा नेपाल सरकार, विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल र काठमाडौं युनिभर्सिटी हाइस्कुलको संयुक्त साझेदारी रहेको छ।
यो परियोजनाको प्रिन्सिपल इनभेस्टीगेटरका रूपमा नेपाली वैज्ञानिक डा. आभाष मास्के रहेका छन्। हाल बडर्स–३, भूउपग्रह परियोजनाका प्रमुख रहेका मास्केले यसअघि नेपाली स्याट–१ नामक भूउपग्रह निर्माण टिमको नेतृत्व लिएका थिए।
थाइल्याण्डको आर्थिक विकासका लागि अन्तरिक्ष प्राविधिक संस्था मिनि बर्डसको एउटा भाग रहेको यस परियोजनाअन्तर्गत थाइल्यान्डले चारवटा, नेपालले एउटा भूउपग्रह निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको विज्ञप्तिमार्फत् जनाइएको छ। यो भूउपग्रहलाई प्राविधिक भाषामा ‘वानयुक्युबस्याट’ भनिन्छ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीको सहभागिता रहेको यो परियोजना विश्वकै पहिलो भूउपग्रह नक्षत्र परियोजना हुने उल्लेख गरिएको छ।
अन्तरिक्ष भू–उपग्रह निर्माण गर्ने प्रयोगशाला ‘स्पेस सिस्टम ल्याबोरेटोरी’ काठमाडौं युनिभर्सिटी हाइस्कुल, चौकोट, काभ्रेमा रहेको छ। यस परियोजनामा काठमाडौं युनिभर्सिटी हाइस्कुलसहित काभ्रेकै सञ्जीवनी नमुना मावि, धुलिखेल, चैतन्य मावि बनेपा र आजाद मावि बनेपाका कक्षा ११ मा अध्ययनरत ९ जना विद्यार्थी संलग्न हुने विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिइएको छ। काठमाडौं युनिभर्सिटी हाइस्कुलका ६ जना र अन्य स्कुलका १–१ जना गरी कूल ९ जना विद्यार्थी सहभागिता रहनेछन्।
यो परियोजनाको समयावधि सुरुदेखि प्रक्षेपण गर्ने बेलासम्म दुई वर्षको हुनेछ। यो भूउपग्रह निर्माण भएपछि पृथ्वीबाट ४ सय किमि दूरीमा पृथ्वीको कक्षमा परिक्रमा गराइने छ। काठमाडौं युनिभर्सिटी हाइस्कुलमा रहेको यो अन्तरिक्ष प्रणाली प्रयोगशाला, बनेपाले उपत्यकाका लागि विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आउटरिच केन्द्रका रुपमा काम गर्ने बताइएको छ।
यस परियोजनामा डाँफे स्पेस मिसनअन्तर्गत प्रशिक्षित विद्यार्थीको समूहले उल्लिखित विद्यालयका विद्यार्थीलाई आवश्यक तालिम र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने छ।
नेपालका सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले भू –उपग्रह निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्नु यो परियोजनाको उद्देश्य हो।
यस परियोजनाको लक्ष्य हासिल गर्न काठमाडौं युनिभर्सिटी हाइस्कुलमा सुरु भइसकेको पहिलो चरणको भू–उपग्रह निर्माणसम्बन्धी बुटक्याम्प डिसेम्बर ३१, २०२१ सम्म चल्ने जनाइएको छ।
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा सुरु गरिएको यो परियोजनाको मुख्य सहयोगीका रूपमा नेपाल सरकार रहने छ भने अन्य आर्थिक सहयोग निजी संस्थाबाट संकलन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस परियोजनाको मुख्य सहयोगी संस्था अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालले हालसम्म सानिमा बंैक, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, बैंक अफ काठमाडौं र गरिमा विकास वैंकबाट सहयोग पाइसकेको छ। अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाललाई डा. महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र तथा न्याटकम र युनेस्कोको पनि सहयोग रहेको छ।